မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်(facebookဖန်တီးသူ) - မှတ်စုစာအုပ်
မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ် ဟာ အမေရိကန် ကွန်ပျူတာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော. ဆော.၀ဲလ် ရေးသားသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီးတော.
မျက်နှာစာအုပ်ကို ဖန်တီးခဲ.တဲ.အတွက် အများအကျိုးအတွက် အလှူရှင် တစ်ယောက်လို.လူသိများ ခဲ.ပါတယ် ။ သူ.ကို ၁၉၈၄ မေလ ၁၄ ရက်မှာ မွေးဖွားခဲ.ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် CEO မှာ ပါမောက္ခ အနေနဲ.ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတောအတွင်း သူရဲ. ဟားဗက် တက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ. Dustin Moskovitz ၊Saverin နှင်.Chris Hughes တို.နဲ. ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို တည်တောင်ခဲ.ပါတယ်။၂၀၁၀ ခုနှစ် မှာ မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဟာ တိုင်း မဂ္ဂဇင်း ၏ စိတ်ဝင်စား ခြင်း ခံရသော တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ.ပါတယ်။
မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဟာ ကို White plains မြို.နယ် ၊ နယူးယောက် ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာမွေးဖွါးခဲ.ပါတယ်။ မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဟာ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သလို သွားဆရာဝန် တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ညီမသုံးယောက်ရှိပြီးတော. နာမည်တွေကတော.Randi ၊ Donna ၊ Arielle တို.ဖြစ်ပါတယ်။Ardsley ဆိုတဲ.အထက်တန်း
ကျောင်းမှာ သင်္ချာ ၊ အတွေးခေါ် နှင်. ရူပဗေဒ ထူးချွန်ဆု ကိုရရှိခဲ.ပါတယ်။မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ် ဟာ ပြင်သစ်ဘာသာ ၊ လက်တင်ဘာသာ နှင်.ရှေးဟောင်း ဂရိစာတွေကို ရေးနိူင် ဖတ်နိူင်ပါတယ်။ မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ် ရဲ.ချစ်သူကတော.
Priscilla Chan နှင့် Mark Zuckerberg ၏ဓါတ်ပုံ
Priscilla Chan (ဆေးကျောင်းသူ) ဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဟာတရုတ်ရိုးရာဘာသာစကားကို နေ.တိုင်းလေ.လာနေပြီးတော. သူတို.စုံတွဲဟာ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာမှာ တရုတ်ပြည်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ.ပါတယ်။
သူ.ရဲ. facebook စာမျက်နှာမှာ သူဟာ လူတွေ ရဲ.ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်တွေ စီးဆင်းမှုကို ကူညီဖို. စိတ်ဝင်စား
တယ်လို.ပြောထားပါတယ်။မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဟာအပြာရောင်ကို အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော. facebook မှာ အများဆုံးအသုံးပြုထားတဲ.အရောင်ကတော. အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဟာ ငယ်ဘ၀ ကတည်းက ကွန်ပျူတာ ကိုအသုံးပြုခဲ.ပြီး အလယ်တန်းကျောင်းကိုတက် တဲ.အချိန်ကတည်းက ဆော.၀ဲလ် တွေ ကိုစတငရေးသားခဲ.ပါတယ်။သူ၏ ဖခင်ဟာ သူ.ကို ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးနည်း
ကို သင်ပေးခဲ.ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော. Newman ဆီမှာ သင်ကြားခဲ.ပါတယ်။မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဟာအထူးသဖြင်. ဆက်သွယ်ရေး တွေနဲ.ဂိမ်းတွေကို ရေးဖို.စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိခဲ.တယ်။ZuckNet ဆိုတဲ. ပရိုဂရမ် တစ်ခုရေးသားခဲ.ပြီး
ထို ပရိုဂရမ်ကတော. အိမ်တွေနဲ. သွားကျန်းမာရေး ရုံးတွေနဲ. ဆက်သွယ်ဖို. အသုံးပြုခဲ.ပါတယ်။
မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ် ဟာ အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ် Intelligent Media Group ကုမ္ပဏီလက်အောက်မှာ
music player တစ်ခုဖန်တီးခဲ.ပြီး Synapse Media Player လို.နာမည်ပေးခဲ.ပါတယ်။Microsoft ကုမ္ပဏီနဲ. AOL တို.က
မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဆီက ၀ယ်ယူဖို. ကြိုးစားခဲ.ကြပေမယ်. သူကတော. ဟားဗက် တက္ကသိုလ်မှာသုံးဖို. ဘဲရွှေးချယ်ခဲ.ပါတယ်။
ဟားဗက်တက္ကသိုလ်မှာ စိတ်ပညာ နဲ.ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာကို လေ.လာသင်ယူခဲ.ပြီး နောက် Course Match ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ကိုရေးသားခဲ့ပြီး
On June 30, 2010, Paul Ceglia, the owner ofawood pellet fuel company in Allegany County, upstate New York, filedalawsuit against Zuckerberg, claiming 84% ownership of Facebook and seeking monetary damages. According to Ceglia, he and Zuckerberg signedacontract on April 28, 2003 that for an initial fee of $1,000 entitled Ceglia to 50% of the website's revenue, as well as an additional 1% interest in the business per day after January 1, 2004, until website completion. Zuckerberg was developing other projects at the time, among which was Facemash, the predecessor of Facebook, but did not register the domain name thefacebook.com until January 1, 2004. Facebook management dismissed the lawsuit as "completely frivolous". Facebook spokesman Barry Schnitt toldareporter that Ceglia's counsel had unsuccessfully sought an out-of-court settlement. In an interview with ABC World News, Zuckerberg stated he was confident he had never signed such an agreement. At the time, Zuckerberg worked for Ceglia asacode developer onaproject named "StreetFax". Judge Thomas Brown issuedarestraining order on all financial transfers concerning ownership of Facebook until further notice; in response, Facebook removed the case to federal court and asked that the state court injunction be dissolved. According to Facebook, the injunction would not affect their business and lacked any legal basis.
The Social Network is based on the book The Accidental Billionaires by Ben Mezrich, which the book's publicist once described as "big juicy fun" rather than "reportage." The film's screenwriter Aaron Sorkin told New York magazine, "I don't want my fidelity to be to the truth; I want it to be to storytelling", adding, "What is the big deal about accuracy purely for accuracy's sake, and can we not have the true be the enemy of the good?" Upon winning the Golden Globes award for Best Screenplay on January 16, 2011, Sorkin retracted some of the impressions given in his script:
On December 8, 2010, Zuckerberg releasedastatement that he had becomeasignatory of The Giving Pledge